जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन के यस्तो आइलाग्यो एसएसपी ज्ञवालीलाई !
तीन दिन अघिमात्रै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख भएका थिए, एसएसपी श्याम ज्ञवाली। नाताले उनी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीका भाइ हुन्।
अस्ति शुक्रबार सरुवा भएका ज्ञवालीले आज (आइतबार) मात्रै जिम्मेवारी सम्हाले। जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन उनलाई ‘भाउँतो’ आइलाग्यो।
जुनियर अधिकृतहरुबाट स्वागत लिएपछि उनी एउटा मिटिङका लागि बाहिर निस्किएका थिए। त्यहीबेला सांसद अपहरणको मुद्दा दर्ता गर्न भन्दै नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु प्रहरी परिसर टेकु पुगे।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्व रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, पूर्वमन्त्रीहरु राजेन्द्र महतो, अशोक राईलगायतका नेताहरु अपरान्ह चार बजे प्रहरी परिसर पुगेका थिए।
सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भन्दै पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ विरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर पुगेका थिए उनीहरु।
परिसर प्रमुख ज्ञवालीको कार्यकक्षमा अन्य प्रहरी अधिकारी र नेताहरुबीच एक घण्टादेखि चलिरहेको छलफलमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरिरहेको थियो भने नेताहरु प्रहरीसँग चर्काचर्की गरिरहेका थिए।
त्यही बेला आइपुगे एसएसपी ज्ञवाली। ज्ञवालीलाई नेताहरुले सबै कुरा विस्तार गर्दै थिए। तर नेताको कुरा नसकिँदै ज्ञवालीले भने, ‘हामी किटानी जाहेरी दर्ता गर्न असमर्थ छौं।’
अपहरण गरिएको भनिएका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवले ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीमाथि दबाब छ। तपाईंहरुले बुझिदिनु पर्छ।’ सभ्य शैलीमा ज्ञवालीले ‘बिन्ती’ गर्दै आफ्नो लाचारीपन देखाएको सांसद यादवले सुनाए। त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ज्ञवालीको ‘बाध्यता’ बुझ्दै कार्यकक्षबाट निस्किने निष्कर्षमा पुगे।
ज्ञवालीको कार्यकक्षबाट निस्किएपछि भट्टराईले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘देशमा ओलीतन्त्र छ। प्रहरी प्रशासन सबैलाई दबाइएको छ। प्रहरीले बुझ्दाबुझ्दै पनि केही गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैन। उहाँहरुमाथिको दबाब हामी बुझ्छौं। उहाँहरुको बाध्यता पनि बुझ्छौं।’
घर पुगेपछि डा. भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘८ जना पूर्व प्रम/उपप्रम/मन्त्री तथा ६ जना वहालवाला सांसद र दर्जनौं पत्रकार सहित देशको राजधानीमै अपहरण जस्तो सरकारवादी मुद्दाको जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले ठाडै म लिन्न जानेको गर भन्न सक्छ भने दूरदराजका गाउँमा निर्धा निमुखा जनताले कस्तो न्याय पाउलान् ? मुद्दा ठीक वेठीक त पछि छुट्टिन्छ नि !’
बोल्न मानेनन् ज्ञवाली
एसएसपी ज्ञवालीले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि नेताहरु घरतिर लागे। ‘जाहेरी दर्ता गर्न किन अस्वीकार गर्नुभएको ?’ भन्ने नेपाल समयको जिज्ञासामा ज्ञवाली बोल्न चाहेनन्।
पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत नबोलेका उनले प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीतर्फ इसारा गरे। किटानी जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको विषयमा प्रवक्ता बोगटीले पनि प्रष्ट कुरा भनेनन्। ‘हामीले थप कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी वकिलको कार्यालयसँग छलफल गर्छौं,’ बोगटीले भने, ‘महोत्तरीलाई सम्बोधन गरी किटानी जाहेरी भएकोले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा परेन।’
कुनै सामान्य व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी भएको भए दर्ता हुन्थ्यो ? भन्ने प्रश्नमा बोगटीले भने, ‘हाम्रा लागि सबै बराबर हुन्।’
प्रहरी, विवाद र नेकपा
केही वर्षअघि आईजीपी हुन निकै पापड बेलेपनि हुन नसकेर डीआईजीबाट रिटायर्ड भएका नवराज सिलवाल अहिले नेकपाका सांसद छन्। भर्खरै आईजीपीबाट रिटायर्ड भएका सर्वेन्द्र खनाल पनि नेकपासँगै नजिक रहेको त यही प्रकरणबाटै प्रस्ट हुन्छ। चर्चामा रहेको ‘सांसद अपहरण काण्ड’ मा खनालसँगै नेकपाका दुईजना सांसद पनि मुछिएका छन्।
अझ समाजवादीका नेताहरु यो सबै प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा भएको आरोप लगाइरहेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री स्वयम् फस्ने जाहेरी लिएर पुगेका एक अधिवक्ता तर्क गर्छन्। उनले भने, ‘नेकपाले यस्तै गुण्डाहरु पाल्ने हो। उनीहरुलाई संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्री अगाडि देखिएका छन्।’
उनका अनुसार प्रहरी परिसर प्रमुख श्याम ज्ञवाली प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीका भाइ भएकोले पनि उनीमाथि दबाब बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सहज छ।